Ny dingana feno amin'ny tetikasa feno fanaka malefaka, voafehin'ny olona vitsy dia vitsy! - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Ny fizotran'ny tetikasa feno famolavolana malefaka, tantanan'ny olona vitsivitsy!
2021 / 06 / 20 FisokajianaInterior design 5375 0
Amin`izao fotoana izao, ny firenena dia saika mitovy firafitra habakabaka sy ravaka anatiny. Ireo kely monina ao aminy dia hahatsapa ho tsy mahazo aina bebe kokoa, raha ny tena izy, tsy mitovy ny fomba fiainan'ny tsirairay. Noho izany dia zava-dehibe ny programa famolavolana fanaka malefaka tsy manam-paharoa ahoana marina no tokony hatao ny programa fanaka malemy?
Androany dia mizara ny fizotran'ny volavolan-drafitra famolavolana malefaka izahay, izay mety kokoa amin'ny mpamorona endrika malefaka.
Fandrefesana habakabaka voalohany
Fandrefesana ny habaka faharoa
Drafitra voalohany amin'ny programa
Manaova sonia ny fifanarahana famolavolana
Fanangonana fampahalalana ao an-trano
Fampivoarana farany ny programa
Fanazavana ny programa
Ovao ny programa
Fantaro ny vokatra ao an-trano
Manaova sonia ny fifanarahana fividianana
Fandrefesana vokatra indray alohan'ny hifindranao
Fametrahana sy fametrahana eo an-toerana
1. Fandrefesana habakabaka voalohany
Tools: mpanapaka, fakantsary
Fantaro ny halehiben'ny habakabaka, ny fananganana mafy fanorenan-trano.
Mandrefy ny habeny, mivoaha amin'ny drafitra gorodona, sary amin'ny haavony.
Fomba fijery mitovy (seho lehibe)
Fijery zoro (sehatra kely)
Nodes (mifantoka amin'ny eo an-toerana)
Fanamarihana: Ny refy dia refesina aorian'ny fametrahana azy mafy, amin'ny fananganana ny vokatra an-trano amin'ny refy habaka mba hahafantarana marina.
2. Fomba fiainana
Process: Ilaina ny fifampiresahana mialoha, andramo ny maka ny hetahetan'ny mpanjifa lalim-paka, izay azo atao avy amin'ireo lafiny manaraka
Tsipika mikoriana spatial (tsipika hetsika tsy miangatra) - ergonomika.
Fanamarihana: Ny tsipika fivezivezena amin'ny habaka no lakilen'ny fametrahana ny fanaka.
Fampahalalana momba ny fialamboly, fahazarana, toerana ary traikefa, tsiro ara-kolontsaina ary fihetsika eo amin'ny fiainana.
3. Seho miloko
Process: Ny loko dia fiteny mangina, mampita vaovao sy fahatsapana isan-karazany amin'ny olona.
Raiso ny feon-gadona loko amin'ny lokon'ny lokon'ny haingon-trano henjana, mitazona ny firaisan-kinan'ny tononkira lehibe sy ny tsy fitovian'ny antsipirian'ny eo an-toerana.
Raiso ny fifandraisana telo lehibe amin'ny loko: ny lokon'ny loko, ny loko lehibe, ny lokony ary ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo.
Fanamarihana: Rehefa manao famolavolana haingon-trano malefaka, ny fifandraisan'ny loko dia tokony ho tapa-kevitra hahatratra ny firaisan-kina sy ny fanovana ary hahafeno ny fepetra takian'ny fiainana.
4. Singa haingo
Ampifandraiso amin'ny mpanjifa izay singa lamaody tian'izy ireo, na fomba Mediterane na fomba sinoa vaovao, sns.
Miorina amin'ny fomban'ny fanaka mafy, manaova antsipiriany manokana, manangona node famonoana mafy (sary).
5. Tetikasa fametrahana
Process: Mampifangaro ireo rohy 4 etsy ambony ho an'ny famolavolana voalohany ny drafitra drafitra ny mpamorona.
Ny singa sary dia fintinina sy dinihina, ary ny fisafidianana mialoha ny vokatra ao an-trano. (lamba fanaka, kojakoja jiro, sary hosodoko sy voninkazo, kojakoja ilaina isan'andro, fitaovana fanaka malefaka)
Fanamarihana: Ny maha-marina ny refy voalohany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahitana voalohany.
6. Fandrefesana ny habaka faharoa
Process: Ny mpamorona dia mitondra ny rafitra fotokevitra fototra amin'ny tranokala, mandinika matetika ary manitsy ny pitsopitsony.
Ny fanamarinana ny haben'ny vokatra, indrindra ny fanaka, mba hanamarinana tanteraka ny halavany sy ny sakany ary ny hahavony, ary tsapany hatrany fa mahay mandanjalanja ilay tranokala.
07. Drafitra voalohany amin'ny programa
Process: araka ny fizotry ny famolavolana trano ho an'ny famokarana programa, tandremo ny haben'ny fifandraisan'ny vokatra (fanaka 60%, lamba 20%, fizarana mitovy mitovy 20%).
Fanamarihana: Raha vao manomboka mianatra momba ny kojakoja ianao dia tsara kokoa ny manaova programa andiany 2-3 mba hanana safidy ny mpanjifa.
08. Manaova sonia ny fifanarahana famolavolana
Process: Manasonia ny fifanarahana famolavolana fanaka malefaka aorian'ny nanamafisan'ny mpanjifa ny drafitra savaranonando.
Sarany famolavolana voalohany: 60% amin'ny saran'ny famolavolana totalina no hampandoavina vola, ary ny sarany fandrefesana dia hampidirina ao amin'ny saram-pamolavolana voalohany. 3 andro hananganana tsy fahafaham-po amin'ny drafitra savaranonando, ny sarany voalohany amin'ny famolavolana dia azo averina tanteraka aorian'ny fanesorana ny saram-pandrefesana ary hofoanana ny fifanarahana.
09. Fanangonana fampahalalana ao an-trano
Safidy marika (fizahana tsena)
Fanamboarana: angataho ny mpamatsy hanome sary CAD, lisitry ny vokatra, teny nalaina.
2. Lamba, fifantina fitaovana fanaka malefaka: fanaraha-maso ny vokatra
(Ny filaminana marina dia: fanaka - jiro sy lamba - hosodoko, zavakanto voninkazo, kojakoja sns.)
10. Fampivoarana farany ny programa
Process: Miorina amin'ny programa fandaharana sy ny mpanjifa hahazoana fankatoavana voalohany, amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny vokatra, hamafana amin'ity programa ity ny vidin'ny vokatra tsirairay sy ny fitambaran'ny vokany. Araka ny fizotry ny famolavolana trano ho an'ny famokarana ny programa, ny fampidirana programa famolavolana kojakoja fanampiny.
Fanamarihana: Ity rohy ity dia ny fandaharana ofisialy eo ambanin'ny drafitry ny programa savaranonando hahazoana ny fankatoavana fototra an'ny mpanjifa, dia azo atao eo ambanin'ny fiandohan'ny loko, ny fomba, ny vokatra, ny fanekena modely amin'ny endrika roa nalaina (eo afovoany, a avo lenta), ka ny mpanjifa dia manana marim-pankasitrahana.
11. Fanazavana ny programa
Process: Omeo ny mpanjifa fampidirana rafi-pandaminana sy feno momba ny fandaharana ofisialy, ary eo am-pamolavolana fanehoan-kevitra tsy miova amin'ny fanehoan-kevitry ny mpanjifa, ka ny dingana manaraka hanovana ny programa, hitadiavana ny hevitry ny mpianakavy rehetra, hamintina.
Fanamarihana: Ny programa tsara dia tsy misy afa-tsy isa 30-40, ny isa 60-70 hafa dia miankina amin'ny fahombiazan'ny mpamorona. Miomàna tsara ary alamino tsara alohan'ny hanoloranao ilay tetika.
12. Ovao ny programa
Dingana: Aorian'ny fanazavana ny programa miaraka amin'ny mpanjifa dia ahitsy ny fandaharana ho setrin'ny valiny avy amin'ny mpanjifa. Anisan'izany ny fanitsiana loko, ny fanitsiana ny fomba, ny fanitsiana ireo singa ilaina, ary ny fanitsiana ny vidiny. Fanadihadiana lalina momba ny fahazoan'ny mpanjifa ny programa.
Fanamarihana: Rehefa manitsy ny drafitra, ny mpamorona dia tsy tokony hihaino ny hevitry ny mpanjifa 100%, fa hampiasa ny fomba fijeriny matihanina manokana hanazavana ny fanazavana sy hifampiresaka mba hamoronana drafitra mahomby.
13. Fantaro ny vokatra ao an-trano
Process: Alohan'ny hanaovan-tsonia fifanarahana amin'ny mpanjifa dia ankatoavy amin'ny mpanamboatra vokatra an-trano ny vidiny sy ny lisitr'ireo vokatra ireo, ary avy eo fantaro ny vokatra an-trano miaraka amin'ny mpanjifa, manamafy azy ireo tsirairay araka ny lisitra ao amin'ny programa fanampiana.
Vokatra marika fanaka, ento aloha ny mpanjifa amin'ny famaritana santionany, vokatra namboarina, ny mpamorona dia tokony hangataka amin'ny mpamorona sary CAD sy lalao amin'ny programa.
Fanamarihana: Ity rohy ity dia lakilen'ny programa fampitaovana, manome ny fototry ny fifanekena momba ny asa any aoriana.
14. Manaova sonia ny fifanarahana fividianana
Process: Manasonia ny fifanarahana fividianana amin'ny mpanjifa, manasonia ny fifanarahana famatsiana amin'ny mpanamboatra
Manaova sonia ny fifanarahana amin'ny mpanjifa, indrindra ny ampahany amin'ny fanaka manokana, hanampiana 15 andro an-tampon'ny fotoana iantohan'ny mpanamboatra ny fandefasana azy.
Fanaovan-tsonia fifanarahana amin'ny mpanamboatra fanaka miampy ny fanekena mialoha rehefa vita ny famokarana fanaka mololo.
Ny mpamorona dia tokony handeha ho any amin'ny ozinina manokana hijerena ny fanaka alohan'ny handokoana azy, ny fitaovana, ny fizotry ny fitandremana vavahady.
15. Fividianana vokatra
Process: mitoetra ao amin'ny mpanjifa aorian'ny fifanarahana, araka ny drafitra famolavolana ny karazana fividianana sy ny fanaingoana ireo vokatra fanampiny. Amin'ny ankapobeny, ny fanaka amin'ny kojakoja ilaina dia voafaritra ary novidiana aloha (30-45 andro). Ny faharoa dia ny lamba sy ny fitaovana fanaka malefaka (10 andro), ary ny kojakoja hafa kosa mila amboarina raha ilaina mba handinihana ny ora.
16. Fandrefesana vokatra indray alohan'ny hifindranao
Process: Rehefa saika handao ny orinasa ilay fanaka na halefa any amin'ilay tranokala, dia tokony hamerenan'ny mpamorona endrika indray ny haben'ny tranokala, namaritra ny haben'ny fanaka sy ny lamba ary ny hafa nekena tao amin'ilay tranokala.
Fanamarihana: Ity no sakana farany an'ny vokatra mankany an-tsaha, raha misy ny olana dia mbola azo ahitsy.
17. Fametrahana sy fametrahana eo an-toerana
Process: Amin'ny maha mpamorona endrika malefaka azy dia manan-danja ihany koa ny tena fahaizana mametraka ireo vokatra.
Amin'ny ankapobeny dia ahitsy mifanaraka amin'ny filaharan'ny fitaovana fanaka malefaka - fanaka - lamba - hosodoko - kojakoja sns. Fametrahana. Isaky ny tonga ny vokatra dia handray anjara amin'ny fametrahana azy ny mpamorona.
Fanamarihana: ny haingo malefaka dia tsy anton-javatra maromaro, dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana. Ny fitambaran'ireo singa fanampiny dia tokony hapetraka amin'ny fandinihana feno ny fifandraisana misy eo amin'ireo singa sy ny fahazarana amin'ny fiainan'ny tompony.
Fanadiovana iray manontolo aorian'ny nahavitana ny fikirakirana fanaka malefaka. Fanaraha-maso fitsidihana fiverenana, fanadihadiana momba ny fiantohana ary fanamboarana ny fanaterana.
Mazava ho azy, ity no dingana fototra ihany, raha te hianatra famolavolana famolavolana fanaka malefaka matihanina kokoa ianao, dia asaina misoratra anarana amin'ny fianarana ny rafitry ny kilasy.
Tagfanaka malefaka Previous :: Peta-kofehy, voninkazo sy vorona, sary hosodoko sinoa, Hazy Jiangnan Flavor︱NoneZone Design Next: 58m2 Famolavolana efitrano malalaka, Fomban'ny Romana «Dite ronono», Fomba Super!
2021 / 08 / 14 3377